Archive du 20190417
Fiandrianam-pirenena ahoana e ?
Resahina sy ventesina ny resaka fiandrianam-pirenena eto Madagasikara, ka lohalaharana amin’io ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Rehefa manonintohina ny tombotsoa politikan’ny mpitondra ny fihetsiky ny avy any ivelany dia ny hoe : tany manana ny fahaleovantenany sy ny fiandrianany i Madagasikara, ka aza hidinkidirana. Isan’ireny ilay raharaha toa mampifanolana ny Afrikanina Tatsimo sy ny Fanjakana Rajoelina, izay tsikaritra ezahina takona sy alamindamina amin’izao fotoana izao.
Etona mangeja hafanana Tokony hidina ambanin’ny 14%
Nanatanteraka atrikasa fiofanana mahakasika ny fandrefesana etona mangeja hafanana (gaz à effet de serre) tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina ny Birao Nasionaly Mpandrindra ny REDD+ omaly talata 16 aprily. Haharita 3 andro izy io ary tanjona ny handinihana sy hifampizarana ny famolavolana ny tatitra mba ahafahana manatontosa ny fanamarinana ireo tarehimarika efa azo eo amin’ny sehatry ny ala, ny fiompiana ary ireo hafa manodidina ny etona mangeja hafanana.
Tantaram-pirenena Nahatety vanim-potoana maro i Michel Rakotobe
Mampiranty ireo sary mifandraika amin`ny tantaram-pirenena etsy amin’ny CEMDLAC Analakely nanomboka omaly talata 16 aprily Rakotobe Michel. mpaka sary an-gazety sady arsivista. Manodidina ny 500 isa ireo sary ampirantiany hatramin`ny sabotsy 20 aprily ho avy izao. Tamin’ity indray mitoraka ity dia mifototra kokoa amin’ny fankalazana ny 29 martsa ny fampirantiana. Hita ao ireo sary sy lahatsoratra an-gazety nivoaka tamin’izany.